Adeegga Qorista Qoraalka ee Somalia
Ma u baahan tahay caawimaad qoris xirfadeed? Ka hel warqad tayo sare leh Adeegga Qorista Diiwaangelinta ugu wanaagsan Somalia ku qoran dhammaan heerarka tacliimeed.
Adeegga Qorista Qoraalka - Sida Loo Helo Tan Ugu Fiican
Weli waad la halgami kartaa fikrad adag ama warqad markay tahay qoritaanka qoraalka iyo qorista waraaqda cilmi-baarista. Ama waxaad go'aansan kartaa inaad shaqaaleyso adeegga qorista qoraalka oo aad si buuxda u fahanto sida ay u adag tahay qorista qoraal ama buugaagta.
Faa'iidooyin badan ayaa ku jira adeegsiga adeeg kaa caawinaya qoritaanka warqaddaada. Laakiin waa inaad taxaddartaa oo aadan qorin qof aad u jaban. Waxaa xaqiiqo ah inay jiraan dad badan oo aan aqoon waxa ay ka samaynayaan qaybta qoritaanka ama baaritaanka.
Markaad raadineyso adeegga saxda ah, waxaa jira waxyaabo badan oo ay tahay inaad tixgeliso. Adeeg qoraal qorid ah ayaa shaqada ku qaban doona lacag aad u yar. Laakiin taasi macnaheedu maahan inay tahay habka ugu fudud ee loo maro. Haddii aad doorato adeeg raqiis ah ka dibna aad ogaato in adeegyadooda ay liitaan ama aysan awoodin inay kaa caawiyaan inay shaqadaadu u ekaato mid dhalaalaya, waxaad ku noqon doontaa mid laba jibbaaran.
Adeeg wanaagsan ayaa had iyo jeer awood u yeelan doona inuu ka jawaabo wixii su'aalo ah ee aad ka qabtid qoraalkaaga. Hadday sidaas yeeli waayaan, markaa waxaad khasaartay oo keliya lacagtaada, waqtigaaga, iyo tamartaada. Waa inay awoodaan inay ku siiyaan macluumaad sida waxa looga baahan yahay iyo inta ay ku qaadan karto inay wax walba ku dhammaystiraan.
Adeegyada badankood waxay ku siin doonaan qiyaas qoraal ah oo ku saabsan waqtiga ay ku qaadaneyso inay ku dhammeeyaan shaqada. Shirkadaha qaar xitaa waxay bixiyaan damaanad ah inay ku heli doonaan qoraalkaaga waqtiga loogu talagalay. Tani waa muhiim maxaa yeelay ballan qaad ah inay sameeyaan wixii ay ballanqaadeen ayaa kaa caawin doonta hubinta inaadan niyad jabin doonin.
Waxyaabaha kale ee ah in la raadiyo waa nooca qofka u shaqeeya shirkadda aad isticmaasho. Adeegga qoraalka qoraalka waa inuu maamulo shaqsi garanaya waxa ay sameynayaan oo raba inuu kula wadaago aqoontooda adiga iyo dadka kale. Shakhsi aan rabin fikirkaaga fikrad fiican maahan. Intaas waxaa sii dheer, adeeg aan soo bandhigin shaybaar shaqo oo ay horay u soo qabteen ayaa sidoo kale dhibaato la kulmi doonta.
Markaad raadineysid adeeg, weydii haddii ay hayaan faylalka shaqadooda. Hadday sidaas sameeyaan, markaa waxay u badan tahay inay daacad ahaadaan oo ay ka hormariyaan waxa ay ka kooban tahay.
Adeegga qoraalka qoraalka ma aha hawl fudud. Waxaana jiri doona waqtiyo aad ku dhici doontid isbaarooyin u muuqda kuwo aan macquul ahayn. Laakiin xusuusnow in haddii aad dulqaad leedahay oo aad diyaar u tahay inaad waxbarto, ay suurtagal tahay inaad si guul leh u dhammaystirto qoraalkaaga oo aan mid lahayn.
Habka ugu wanaagsan ee lagu ogaan karo in adeegga qoraalka uu sumcad ku leeyahay waa in la ogaado waxa ay aqoonsi yihiin. Kuma filna inaad wacdo oo aad aragto haddii ay jiraan dib u eegisyo diidmo ah. Waxaad u baahan tahay inaad si sax ah u ogaato sida shaqadooda ay u heleen kuwa kale.
Fiiri bogagga internetka ee kala duwan si aad u aragto haddii dadku cabanayaan. Haddii ay yihiin, waxaad u baahan kartaa inaad meelo kale ka raadsato. Ma jirto sabab loo joojiyo la xiriirida qorayaasha si toos ah oo loogu sheego inaadan hubin inaad rabto inaad shaqaaleyso. maxaa yeelay iyagu ma ay keenin waagii hore.
U fiirso tayada shaqadooda. Weydii haddii ay tixraacyo ka bixiyaan ardaydii hore oo ay arkaan sida ay uga soo baxeen imtixaannadaas. Markasta oo ay sii fiicnaato tayada shaqadooda, natiijooyinka wanaagsan ayaa noqon doona. iyo sida ay ugu qanacsan yihiin macaamiishoodu.
Xusuusnow, adeegga qoraalka qoraalka ee aad shaqaalaysiisay ayaa noqon doona midka mas'uulka ka noqonaya in qoraalkaaga loo beddelo heer sare. Marka waxaad dooneysaa inaad hubiso in si sax ah loo qabtay. Inta badan ee hawsha ku lug leh, way ka sii adag tahay in la qoro shahaadada, inta badan waa inaad bixisaa.